ट्रिमबलले GeoXH सुरूवात गर्दछ, वास्तविक समयमा सबमेटर प्रेसिजनको साथ - जिओफुमाडास
मे, 2008 cadastre, topografia
यो विश्वसनीय प्रतीत छैन, तर यो Trimble ले के भन्यो, GeoXH 2008 वास्तविक समय मा उप-मीटर सटीकता प्रदान गर्दछ।
यो उपकरण खराब लाग्दैन, जुन मोबाइल फोन मार्फत GNSS टाइप स्टेसनको साथ डेटा प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यसबाहेक यहाँ सँगसँगै धेरै शङ्का गर्दै प्रयोग विन्डोज मोबाइल 6, वायरलेस, ब्लुटुथ र अन्य pickets ..., यो कि ल्याटिन अमेरिका धेरै मतलब हुनेछ त्यसैले submeter WAAS त्यहाँ cuasigratuitos वा सशुल्क सेवाहरू संयुक्त राज्य अमेरिका वा युरोप मा ... हुनेछ बुझ्ने गरिन्छ टिकट »वास्तविक समय»
निश्चित रूपमा तपाईं प्रोजेक्टमा धेरै छिटो चल्न सक्नुहुन्छ जसको लागि यो परिमाण पर्याप्त छ। 1 मात्र पेन्सिल मोटाइ Delineation 10,000 मिटर भन्दा बढि त्रुटि छ: मामला मा, एक देहाती वा ग्रामीण भूमि, कुनै समस्या एक पद्धति photointerpretation प्रयोग गरियो भने किनभने यसरी काम, मुद्रित orthophoto5संग हुनुपर्छ । निस्सन्देह, एक शहरी विद्रोहको लागि, जहाँ पड़ोसीहरूले 15 सेन्टीमिटरको पर्खालको मोटाईमा लडाउँछ, यो पोष्ट प्रसोधन गर्ने सबै भन्दा राम्रो हो।
मैले अपवादको साथमा सबमेट्रिक सेटिनेजको साथमा धेरै किफायती जीपीएस समाधानहरू देखेको छैन मोबाइल मेपर म्यागेलन को लागी केवल $ 1,500 तिर हिड्न र उप-मीटर परिमार्जन गर्न अनुमति दिईयो तर पछि प्रसोधनको साथ अर्को उपकरण जस्तै बेस वा अर्को आधार प्रयोग गरी, तर सधैँ «पोस्ट»।
आफैमा, मोबाइल म्याप ब्राउजर भन्दा बढी केही छैन जुन, बिना-प्रोसेसिंग बिना,2बाट3मिटरमा परिमार्जनहरू प्राप्त गर्दछ, तर विपरित सुधार उप-मीटर टाटासिडीहरूसँग पुग्न सकिन्छ। यी क्षमताहरू हुन सजिलो तथापि तिनीहरूलाई वास्तविक समयमा आशा गर्ने आशा छैन।
तपाईं यसलाई सस्तो थियो मलाई सोध्न भने, म, थाहा छैन म यसलाई उहाँले बरु टच स्क्रीन विन्डोज मोबाइल, यो केही वायरलेस र सामान तर मोबाइल नक्साङ्कनकर्ता CX नयाँ संस्करणका छैन थियो कि प्रयोग भएन, तथ्यलाई थियो सोच्न प्रयोग तपाईंले तिनीहरूलाई भेट्टाउनुभयो $ 2,000 भन्दा कम।
यो Thales टुटाउन मोबाइल नक्साङ्कनकर्ता व्यावसायिक, अब ब्राउजरहरु dabble र को लागि एक लाइन MM6 यो बजार आउँछ भने राम्रो लहर हुनेछ भनिन्छ भर्नको जस्तो देखिन्छ तापनि तिनीहरूले उप-मीटर शुद्धता लागि पोस्ट प्रक्रिया संग विन्डोज मोबाइल6छ बोल्न $ 1,200 भन्दा कम ... म एक मित्र, उहाँले SSM मार्फत वास्तविक समयमा एक geodatabase खुवाउने को विचार काम गरिरहेको छ ... आषा साँचो हुन (Thales रूपमा), र सायद regarles गफ लागि हामीलाई आज्ञा दिन भन्नुभयो।
आह, मलाई Trimble GeoXH को मूल्य को बारे मा सोचा थियो?
प्रयोग गर्दै फ्रुगल, म यो प्राप्त गर्दछु:
यो आमाको मायालाई तुलना गर्दैन ... तर केला पहेंलो रंग राम्रो छ, छ। जबसम्म मेरो मोबाइल मेपरको लागी बसोबास गर्नेछु, र म यो हेरचाह राख्छु यो यसले भाइरस लाई फ्लूमा लिन्छ र मलाई $ 1,500 खर्च गर्दछ।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो AutoCAD वा Microstation मा एक्सेल तालिकाहरू आयात गर्नुहोस्
अर्को पोस्ट Google Earth र यसको क्रियोल टेक्नोलोजीअर्को »
२ Rep जवाफ "ट्रिमबलले जियोएक्सएच सुरू गर्दछ, वास्तविक समयमा सबमेटर प्रेसिजनको साथ"
विलियम डैनटे युग्राका रोडास भन्छिन्:
म एक पेरू हूँ submeter जीपीएस भू XT 2008, उद्धरण चाहनुहुन्छ किन्न चाहन्छ र म तपाईँले किन्न कसरी
मैले एक कोलम्बिया 2000000 मूल्यमा रुचि राखेको छु jhoferji85@yahoo.es
स्पेनमा geoexplorer xh किन्नुहोस्
म geoexplorer xh 2005 बेचिरहेको छु, म स्पेनमा छु
रिचर्ड रिकोर्डो हानैनकुनी चिकोक्कोटा। भन्छिन्:
राम्रो बिहान म एक GO एक्सएच ब्राण्ड छ IM ट्रम्बल »…… .. म बिक्री गर्दैछु; कसैको फोटो मेरो फेसबुक मा छ: रुचिकर रिचर्ड
धन्यवाद ………… .. 🙂
एडगर मनुअल लेलेन्स कोलाजोस भन्छिन्:
तपाईंको TRIMBLE जीपीएस भू xh XT किन्न या बोगोटा, कोलम्बिया sotfware प्रक्रियापछि संग, वितरक देखि जानकारी अनुरोध गरियो।
महत्त्व जान्नको लागि महत्त्वपूर्ण C कोलम्बियाई पेसोसमा, अर्गडेस्कोले टीमको इमेजको साथ मेरो मेलको सबै सूचनाहरूको पूर्ति गर्दछ।
भाइहरु म यस उपकरणको मूल्य जान्न चाहन्छु मेरो देश भेनेजुयला
मार्को मारिन Challco भन्छिन्:
निश्चित रूपमा GEO एक्सप्लोरर GEO XH, यसको यातायातमा सबैभन्दा हल्का उपकरण हो।
हामी यी उपकरणहरूको वितरक वा विक्रेता होइनौं। तपाईं आफ्नो देश मा तिनीहरूलाई बेच्ने कम्पनी संग एक उद्धरण पाउन सक्नुहुन्छ।
जुआन RAMPAS BAEZ भन्छिन्:
Hola यी मिसिन धेरै असल हो तर म के मूल्य भू भू xh XT आश्चर्य र म INTERASADO प्राप्त गर्नको हुँ मलाई पठाउन उद्धरण जानकारी मोल
मैले GEOXH किन्नु पर्छ, कसैसँग बिक्रीको लागि छ? धन्यवाद…
तपाईले इक्वाडोरमा आफ्नो Trimble डीलरसँग जाँच गर्नुपर्छ।
नमस्ते साथीहरु, म एक जीपीएस जियो एक्सएच एक्सएनयूएमएक्स किन्न चाहान्छु जुन इक्वेडरमा खर्च हुनेछ
नमस्कार !! म, जीपीएस GeoExplorer 2008 एक मदत चाहिन्छ एउटा v3.0 TerraSync जानकारी उचाल्न र म प्रक्रिया पोस्ट चाहन्थे जब रिसेप्टर मेरो प्रकार अज्ञात छ किनभने कुनै पनि स्थिति सही छैन सकिएन भनेर मलाई बताउँछ। नयाँ संस्करण स्थापना गर्न प्रयास गर्नुहोस् र त्यहिको लागि जान्छ। Agradesco तपाईंको अग्रिम सहयोगमा। धन्यवाद!
तपाईं यसलाई ServiTododitos मा किन्न सक्नुहुन्छ
लुइस वास्वाज भन्छिन्:
नमस्कार, तपाईं कसरी हो, म जान्न चाहन्छु कि भेनेजुएलामा ठाउँ छ जहाँ म यसलाई खरीद गर्न सक्छु।
लिमामा म EPTISA सिफारिस गर्छु, फर्नोडोडो परेडहरूमा कुरा गर्छु।
MARCO CARRASCO GIRALDO भन्छिन्:
म पेरुविन म एक उपमतीय जीपीएस गर्न चाहन्छु, म यो प्रश्नहरू सोध्छु, म TOPOGRAPHER हुँ। र म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु कसरी
रेन्न्ड गार्सिया भन्छिन्:
नमस्ते साथीहरु म जीपीएस किन्न चाहान्छु XO 2008 के हो THE धेरै कमान्डक हो तुरून्त धन्यवाद।
मैले दुवै टोलीहरू बीच केही पङ्क्तिगत परीक्षण गरेका छन्। बिना हिचकिचाहट म जियो एक्सटी वा एक्सएचमा बसें।
मोबाइल नक्साङ्कनकर्ता मैले पहिलो क्षणमा अंक लिएर5मिनेट पछि म फिर्ता लिन गए: 4m विपरीत
हामीले ट्रिमबलको खरिदका लागि रोज्यौं।
यो एक अनुभव हो तर म यो पारित गर्नेछु।
मूल्यको लागि जस्तै 4000-4500 €
एक सहकर्मीले ट्रिबल जिओ एक्सप्लोररलाई "मिलियन डलर नेभिगेटर" भनेका छ किनकि पुरानो पेसेटस मध्ये एक मिलियन अहिले एक्सएनयूएमएक्स हजार युरो हो।
तिनीहरू धेरै राम्रो र व्यावसायिक टोली हुन्।
खैर तपाईं अंतर सुधारहरू NTRIP को नेटवर्क छ यदि मेट्रो बारेमा विवरण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लुटुथ फोन मार्फत इन्टरनेट र यो अंतर सुधारहरू जहाँ परम्परागत EGNOS (WAAS) द्वारा रेडियो (RASANT प्रकार) पठाइएका छन् जो भन्दा राम्रो डाउनलोड छन् जोडिएको छ।
धेरै स्पेनिश स्वायत्त समुदायहरूमा यस प्रकारको "सक्रिय" जियोडेटिक नेटवर्कहरू लागू भइरहेको छ र यस्तो देखिन्छ कि उनीहरूले धेरै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेछन्।
उपकरण व्यवसायीक सर्वेक्षण परम्परागत RTK गर्न वस्तुतः बराबर वीआरएस भनिने प्रविधी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईं आधारभूत एकाइ सुरक्षित मा।